Qoyska dhalay wiil 6 Sano kaddib ku dhintay Xabsiga Dhexe oo baaq u diray Dowladda – Hornafrik Media Network
Ehelka Xasan Maxamuud Rooyaaye oo lix sano ku xirnaa Xabsiga dhexe ee Xamar islamarkaana dhawaan ku dhex geeriyooday Xabsiga ayaa waxaa ay dowladda ka dalbadeen in caddaalad la horgeeyo cidda dishay wiilkooda.
Shariif Cali Muuse oo adeer u ah wiilka Xabsiga ku dhex dhintay ayaa u sheegay Idaacadda Mustaqbal in Xasan 8 Sano oo xabsi ah Maxkamad ku xukuntay kaddibna isaga oo lix sano qaatay uu geeriyooday.
Sababta geeridiisa ayuu ku sheegay in ay timid kaddib markii Maxaabiis Kubad wada c iyaareysay oo uu ka id ahaa ay mid ka mid ah dagaallameen kaddibna saraakiisha Xasbiga ku xireen kunteenar halkaasna dhawaan ku geeriyooday.
Xasan oo sida uu sheegay Adeerkii Shariif ka yimid Baaddiye ayaa lix Sano ka hor Askari ka qabtay Demada Howlwadaag isaga oo Al-shabaabnimo ku eedeynaya,waxaana intaas kaddb askarii dalbada lacag iyada oo reerkuna sheegeen in aysan heyn lacagta uu askariga dalbaday taasna ay sababtay in Maxamad la hogeeyo kuna ridday 8 Sano oo xukun ah.
Waxaa uu Shariif sheegay in hadda waqtiga xabsigiisa ay ka dhinayd labo Sano kali ah,waxaana uu sheegay in wiilkooda uu dilay sarkaalka Kunteenarka ku xiray.
Dowladda Federaalka ah ayuu ka dalbaday in ay caddaaladda horgeeyso Saraakiisha wiil;kooda sidaas u dilay,waxaana uu intaas ku daray in falka lagula kacay uusan xeer Islaam iyo qaanuunka kale ee caalamka qabin.